कुस्मीसेरामा सन्चालित तीन दिने स्वास्थ्य शिविरमा पहिलो दिन ३५४ जनाको उपचार ! | ebaglung.com
२०७५ पुष २७, शुक्रबार १९:३७	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
सन्ध्या आचार्य, कुस्मीसेरा २०७५ पुस २७ । जैमिनी नगरपालिका १ कुस्मीसेरामा ३ दिने निशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन भएको छ । गोर्खा वेल्फेयर ट्रष्ट नेपाल र कादुरीको आयोजनामा भएको उक्त शिविरमा आज ३५४ जना विरामीको दर्ता गरिएको थियो । जसमा जनरल फिजिसियनतर्फ ११० जना छालाका विरामी २५ जना २५ देखि ३० जना पाठेघरका विरामी ,र अन्य आँखा तथा दाँतका विरामीको स्वास्थ्य जाँच गरिएको छ ।
आजको दिनमा बढी आँखाका विरामी आएका छन् भने आँखाको पावर जाँच गरि ४० जना भन्दा बढीलाई निशुल्क चस्मा पनि वितरण गरिएको छ । २५ जना अप्रेशन गर्ने खालका विरामी पाईएको जय लिम्बुले बताए । साथै उनले अप्रेशन गर्ने खालका आँखाका विरामी भएमा र न्युन आर्थिक अवस्था भएमा अवस्था हेरी सहयोगको लागि पहल गरिने कुरा पनि वताए ।
दाँतका रोगीहरुलाई दाँत उखेल्ने, भर्ने दाँत सफा गर्ने व्रस टुथपेष्ट पनि बाडिएको छ । स्त्री रोगमा पाठेघर सम्वन्धी जाँच र उपचार गरिएको र महिलाहरु कडा खालका पाठेघर रोगीहरु पनि धैरै नै भेटिएको शिविरले जनाएको छ । शिविरमा ३५४ जना विरामीलाई निशुल्क परार्मश ,स्वास्थ्य शिक्षा दिईएको आयोजकले जनाएको छ ।
शिविरमा राम्रोसँग विरामीको चेकजाँच गरिनुका साथै औषधी पाइएको विरामीको प्रतिक्रिया आएको छ । शिविर हरेक दिन विहान ८ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म संचालन हुनेछ भने उक्त शिविर कुस्मीसेरा बजारको शान्ति माध्यामिक विद्यालयमा भएको छ । सो शिविरको उद्घाटन नगरप्रमुख ईन्द्रराज पौडेलले गरेका थिए ।
२०७६ असार २४, मंगलवार ०४:२२
जैमिनीमा बाँदर आतंकका कारण बसाईसराई तीब्र, नियन्त्रणका लागि नपाव्दारा ५ लाख बजेट विनियोजन !
२०७६ असार २०, शुक्रबार १९:०१